Wasiir British ah oo sheegay inay jirto fursad lagu joojin karo ka bixintaan Midowga Yurub – Bandhiga
Wasiir British ah oo sheegay inay jirto fursad lagu joojin karo ka bixintaan Midowga Yurub
Wasiirka ganacsiga ee Britain Liam Fox ayaa sheegay inay jirto suurtogalnimada fursad %50 ah oo lagu joojijin karo in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub haddii baarlamanku diido heshiiska xukuumaddu la gashay Midowga Yurub ee ku saabsan ka bixitaanka bisha soo socota.
Fox oo ah taageerayaasha ugu waawayn ee bixitaanka Britain ee Midowga Yurub oo waraysi siiyay wargayska Sunday Times,ayaa waxa uu yiri “” Haddii aanan u codayn wayno ka raalli ahaanshaha heshiiska ma filayo in ka bixitaanka Midowga Yurub uu dhaafayo % 50.
Theresa Mat ayaa bilowgii bishan joojisay codayntii qorshaysnad ee loo qaadi lahaa heshiiskeeda kadib markii ay ogaatay in baarlamanku diidi doono,waxana la filaya in codaynta heshiiskan ee xildhibaannadu ay bilaabanto 14-ka bish January.
Dhinaca kal madaxa guddiga Yurub Jean-Claude Juncker, ayaa sheegay in Midowga Yurub uunan isku dayi doonin Britain in ay sii joogto Midowga Yurub oo uu doonayo inuu bilaabo inuu ka hadlo mustaqbalka xiriirka ka dhaxayn doona isla marka baarlamaanka Britain ogolaaday inuu ka baxo Ururka si xooga loo saaro midnimadiisa ka hore doorashooyinka baarlamaanka Yurub ee ku beegan bisha May.
Waxa uu intaa ku daray in Midowga Yurub uu diyaar u yahay inuu wadahadal kala yeesho heshiis cusub oo lala galo si toos ah boqortooyada Britain kadib markii baarlamaanka Britain marka uu oggollaado heshiiskan ka bixitaanka Midowga Yurub.
“Dowlad aan ilaali karin ubadkeena kuma aamini karno mustaqbalka dalkaan” Sheekh Shariif